Ezumike 2016, ihe a ga-eme na Norway | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Nduzi, Norway
Ọ ga-amasị gị ịgbanahụ oke ọkụ a N'oge okpomọkụ 2016? Ọ bụrụ otu a, gaa Norway! Ọ naghị ekpo ọkụ ebe ahụ ma ọdịdị ala ahụ dị oke mma. Na oge oyi nke Norway ụbọchị ndị ahụ toro ogologo karị, abalị dị mkpụmkpụ ma na-eme ihe n'èzí. N’agbata ngwụsị ọnwa Juun na mbido Ọgọstụ, ihu igwe na-ekpo ọkụ ma ọ nweghị abalị miri emi. Okporo ámá jupụtara na ndị mmadụ chọrọ ikpori ndụ. Cheedị onye Norwegian na ụbọchị 30ºC! Obi dị ya ezigbo ụtọ!
Ma norway ọ bụghị ebe dị ọnụ alaỌ bụ eziokwu, yabụ anyị ga-eme ọnụọgụ ma hazie oge njem anyị ọfụma ma ọ bụrụ na anyị achọghị ịlaghachi agbaze. Olee otú gaa Norway na obere ego? Ga-ahụ ihe ị ga-eme, ebe ihi ụra na ihe ị ga-eleta, ya mere dee data ndị a, chịkọta ego ma merie ma gaa njem!
1 Akwụ ụgwọ na Norway
2 Ihe ị ga-eme na Norway
Akwụ ụgwọ na Norway
Ọ bụrụ na enwere ihe anyị na-agaghị agbanahụ, ọ bụ akwa anyị na ụlọ anyị kwa ụbọchị ma ebe a abụghị ebe dị ọnụ ala n'ụwa. The hotels nwere udu nke gburugburu 100 euro kwa abalị maka a abụọ otú Gọọmenti rụrụ, Airbnb na nyiwe ndị yiri ya kwenyere. Otu ụlọ mbikọ na-akwụ ụgwọ n'etiti 200 na 500 NOK (21 na 52 euro) kwa abalị n'ụlọ ezumike na ihe dịka 750 NOK (80 euro), n'ime ụlọ nkeonwe. Ego ị chebere na ebe obibi ga-adị maka njem na mmemme.
Ọzọkwa, ọ bụrụ n ’ị chọọ ịga maa ụlọikwuu Norway ga-emeghere gị aka ya n’ihi n’ ogige mba ma ọ bụ ala ọha a mara ụlọikwuu na n'efu ọ bụrụhaala na ị nwere akụrụngwa gị. Bụ Ọ bụ nhọrọ kachasị akụ na ụba nke niile. Rie? Iri nri dị oke ọnụ, gbakọọ euro 30 maka isi ụlọ ọrụ, yabụ echeghị m na ị na-anọdụ n'ụlọ oriri na ọ aụ restaurantụ mgbe niile.
A menu McDonald na-akwụ ihe karịrị 14 euro Ma ọ bụrụ na nri ngwa ngwa dị na mmanya ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ ị nwere ike inweta ya maka euro asatọ. Otu ndi a ma ama shwarma ma ọ bụ pizzas. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ịgbazite ụlọ, kerịta sofa n'ụlọ mmadụ ma ọ bụ nọrọ n'ụlọ ahịa ahụ, ihe kachasị mma bụ ịga nnukwu ụlọ ahịa ma zụta nri. Ma oburu na i noro na ulo mbikọ. Drinkụọ mmanya? Pụ na ogwe na-apụ imebi akpa gị n'ihi na ihe ọ drinksụ drinksụ na mmanya na-eri n'etiti 60 na 70 NOK, isii, euro asaa, obere ihe, obere obere.
Ebe nkiri ndị njem nlegharị anya na Norway dị oke ọnụ. Ọnụ ụzọ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na-akwụkarị 80 NOK, n'agbata euro asatọ na itoolu. Ga njem site na fjords nwere ike ịdị n'etiti 400 na 500 NOK (42 na 55 euro), yabụ ọ bụ ihe amamihe dị na ya zụta Norway njem nleta. Ọ bụrụ na ị gaa Oslo, Bergen, zụta kaadị ndị njem n'ihi na ọ ga-enye gị ohere ịnweta ọtụtụ ebe nkiri na ọnụahịa ezi uche dị na ya.
Na Oslo ị nwere Oslo gafere: na-emepe ụzọ karịa ihe ngosi nka 30 na ebe nkiri, njem ọha na eze na-akwụghị ụgwọ, ebe a na-adọba ụgbọala na ọdọ mmiri n'èzí, ịgagharị agagharị, ebe a na-eme njem egwu, egwu ịrị elu, ịgba ọsọ na mgbazinye igwe, na mwepu ego n'ụlọ nri, ụlọ ahịa, na ndị ọzọ. E nwere ụzọ edemede abụọ, Okenye na Nwa, yana n’ime ngalaba atọ: nke 24, 48 na 72 awa. Adult Oslo Pass na-akwụ ụgwọ NOK 335, NOK 490 na NOK 620 (ihe dị ka euro 35, 45, 52 na 66). Nwere ike nweta ya na ntanetị ma ọ bụ jiri ngwa ahụ.
Na Bergen ị nwere Kaadị Bergen: transportgbọ njem ọha na eze n'efu, iji ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ ala gbara gburugburu obodo na mpaghara ahụ, tiketi na-akwụghị ụgwọ ma na-ebelata ihe ngosi nka, ebe nkiri, ihe omume ọdịnala, njem na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ. Enwekwara uzo abuo: Okenye / Nwa na Nwa akwukwo / Retiree. E kewara nke mbụ n'ime awa atọ: 24, 48 na 72. Ọ na-efu NOK240 / 90, NOK 310/120 na NOK 380/150 (25/9, 50; 33/13 na 40/16 euro).
Ihe ị ga-eme na Norway
Mara ihe gbasara ọnụahịa na ụgwọ ezumike ezumike na Norway, anyị nwere ike ikwu maka ihe ị ga-eme ebe a: gaa Oslo, Bergen, Trondheim, Tromso, ndị fjords, ụfọdụ Ogige Ntụrụndụ na North Cape, a gụrụ ya n’etiti ndị kasị mma.
Oslo bu isi obodo Norway, obodo na-adabere na fjord. Ọ bụ ya mere ị ga-eji nwee ike ịgagharị njem ụgbọ mmiri wee pụọ iji chọpụta agwaetiti na ọdịdị ala. Na Oslo Royal Obí Ọ bụ ụlọ mara mma nke narị afọ nke XNUMX na ebe ọzọ nwere ike ịkwado bụ Ogige Ugwu Vigeland. Na itinye usoro Vikings, gaa ije gburugburu ya Ihe ngosi ndi mmadu nke ndi Norwegianma ọ bụ na ọ bụ n’akụkụ nke ọzọ nke fjord, na Bygdoy nwere ezigbo ọgbakọ ochie na ndị niile akụkọ banyere vikings.
Bergen bụ World Heritage obodo na ọ bụ obodo ahụ na-eme ama Norwegian fjord cruises. Ọ bụ World Heritage Site n'ihi na akpọrọ agbata obi brigen Ọ dị otu narị afọ na ụlọ ya mara mma. Enwekwara ụdị ebe ngosi ihe mgbe ochie niile yana gburugburu ị nwere ugwu asaa iji wee gbagoo ma tụgharịa uche na obodo ahụ na ọtụtụ ihe omume: ụgbọ mmiri, ụkwụ, bọs, ụgbọ oloko panorama (Flam), njem segway ma ọ bụ ụgbọ elu helikopta ma ọ bụrụ na ị nwere ego karịa.
Trondheim Ọ bụ mahadum mahadum n'ihi na ebe a bụ Mahadum sayensị na teknụzụ dị na Norwegian. Omenala ndu siri ike na enwere ememme egwu n’afọ niile. N'oge ọzọ akpọrọ ya Nidaros na Nidaros Katidral Ọ bụ otu n'ime ya kasị touristic ụlọ. Ọzọ bụ Velọ ihe nkiri Music Ringve. Enwekwara ndi Gamle bybro, akwa mmiri ochie nke malitere na narị afọ nke XNUMX, ụlọ ngosi ihe ngosi nka nke Pop na Rock, Nkume na ogige mmiri Pirbadet.
Ya na arctic bụ tromso, dị kilomita 350 site na Arctic Circle. Ọfọn n'ebe ugwu bụ njedebe ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ Ugwu Ugwu ma ọ bụ Northern Ìhè, n'etiti September na March, na N'etiti abalị Sun n'etiti May 20 na July 20. Oge ikpeazụ a bụ oge kachasị mma ịme ọtụtụ n'èzí. Nature emesapụ aka na gburugburu obodo na enwere saịtị ndị pụrụ iche. Nwere ike ịga leta Hurtigruten, enwere ọrụ ụgbọ mmiri ugboro abụọ n'ụbọchị nke na-eme ọmarịcha njem a ma kwado obere njem.
Ma n'ezie, ọ nweghị Norway na-enweghị fjords. Enwere ọtụtụ ndi norweji fjords mana Geirangerfjord bụ nke UNESCO chebere. Mmiri ya na-acha anụnụ anụnụ nke ukwuu, enwere ọdọ mmiri, ọtụtụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ugwu nwere snow na-adịru ebighi ebi. Ọ bụghị naanị ya mere ị ga - ahụ ebe ọdịda anyanwụ ndị a na - agaghị echefu echefu na mpaghara ọdịda anyanwụ nke mba ahụ. Okwusa Ozi Ọma O doro anya na akwụkwọ ozi zuru oke na-echere gị na Norway.
Amaara m na Norway abụghị ebe dị ọnụ ala n'ụwa ma na ọtụtụ mmadụ na-eche ka ha lara ezumike nká ịga, mana ọ bụrụ na ị nwere ike, mara Norway tupu oge eruo. ndị mmadụ nwere omume enyi, ha maara Bekee n'ụzọ zuru oke ma dịka ihe kachasị mma ha nwere bụ ọdịdị ha dị egwu, echere m na ị ga-etolite etolite.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Nduzi » Oge ọkọchị 2016, ihe ị ga-eme na Norway